Ina njikere na-blown pụọ na Italy ụgbọ okporo ígwè site na oge ị na kwụpụ ụkwụ n'elu ya oké ala. The n'ala akụkọ ihe mere eme, ebube ije, omenala karịrị akarị, na ndị dị otú ahụ mara, ọkaibe, ndị na-akpa ezigbo àgwà ga-abụ ihe ị ga-echeta ruo ụbọchị ikpeazụ gị! Chọrọ mara ihe nzuzo? Italy ụgbọ okporo ígwè bụ akpali karị karịa gị nwere ike iche!
Trenitalia, mba okporo ígwè ọrụ niile mba ụzọ gasị; bụ ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ oge niile.
The kacha mma nhọrọ bụ lelee Italy ụgbọ okporo ígwè, na na na-na-adịghị ize ndụ n'akụkụ: tụnyere ahịa, ụbọchị, na oge ma chọta nhọrọ kachasị dabara na mmefu ego gị na map njem gị. Were a anya ma jiri schedules. Ị ga-eleghị anya a ga-mgbagwoju anya na ala, ya mere ebe a bụ abbreviated forms ị ga-ahụ na Saịtị Trenitalia:
I Kwesịrị AKWỤKWỌ Your Italy ụgbọ okporo ígwè Ticket Online ma ọ bụ Zụrụ Ọ na Station?
The ozi ọma banyere ntinye akwụkwọ gị tiketi ka Italy ụgbọ okporo ígwè bụ na online ntinye akwụkwọ usoro na-arụ ọrụ flawlessly na bụ super pụrụ ịdabere na. Stations n'ebe nile pụrụ ịbụ mmadụ jupụtara - na onye kwesịrị na ụdị nchegbu, nri? Ị na-nyere nhọrọ ma akwụkwọ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi online. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-niile banyere spontaneity - echere ruo ị ga-esi ebe na ịzụta gị tiketi mgbe.
Olee Otú Ị Ga-esi Italy ụgbọ okporo ígwè Ozugbo ị nwetara Your Ticket?
Mgbe ị ga-esi Italy site ụgbọ okporo ígwè, gị ọzọ cue bụ nnukwu nghọta board. Nke ahụ bụ ebe ị ga-enweta ihe niile emelitere ọmụma ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ na osisi, anya n'ihi na a ìgwè mmadụ nke ndị guzo n'okpuru ihe nnukwu - na voila! Ọ bụrụ na ị na-edebe ihe i ụgbọ okporo ígwè e depụtara ozugbo, na-na-amalite panicking. Jide n'aka na ị na-achọ na "Partenze" (Ndị Ọpụpụ) kama "Arrivi" (Ndị mbata) zere aghara. Onye kasị nta na-agbagwoju anya nhọrọ nke niile bụ na-aga site na nọmba ụgbọ oloko na ọpụpụ oge. Mgbe ị na-ahụ gị na ụgbọ okporo ígwè, anya n'ihi na "Bin,"N'ihi na" binario " (n'elu ikpo okwu). Ozugbo ị nwetara na ota, na ị bụ nri na-aga!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-to-italy-by-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)